Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Airlines » I-Airways yoMzantsi Afrika yazisa ngeSigqeba esitsha soLawulo
IBhodi yezoKhenketho yaseAfrika • Airlines • isikhululo • uhambo ngomoya • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • iindaba • abantu • Ukwakha kwakhona • Xanduva • Iindaba zaseMzantsi Afrika eziQalileyo • Tourism • uthutho • Iindaba zeWired Travel • Iindaba ezahlukeneyo
USimon Newton-Smith ubize iSigqeba sethutyana seSAA: soRhwebo
USimon Newton-Smith wayekhe wabamba isikhundla esiphambili kubunkokheli ngeVirgin Atlantic Airways kunye neQatar Airways.
USimon Newton-Smith ubize iSigqeba sethutyana seSAA: soRhwebo.
USimon Newton-Smith ujoyina iqela elilawulayo leSAA eRhawutini.
USimon Newton-Smith ngugqirha oqeqeshiweyo wenqwelomoya kunye nerekhodi yelizwe.
I-South African Airways (SAA) iyavuya ukwazisa ngokuchongwa kutsha nje kwegqala kumzi-mveliso wenqwelo-moya, uMnu Simon Newton-Smith, kwisikhundla se-SAA Executive Executive: Commercial.
USimon ujoyina iqela elilawulayo le-South African Airways eRhawutini, eMzantsi Afrika elinemvelaphi enkulu yenqwelomoya kwi-SAA ngo-2000 kwaye esebenza njengeSekela Mongameli, ukuThengisa eMntla Melika, apho akhokele ukuthengisa, inkxaso yorhwebo, iqela kunye namaxabiso amasebe. Wayephethe isikhundla esiphambili sobunkokheli ngeVirgin Atlantic Airways njengoSekela Mongameli, ukuThengisa eMntla Melika kunye noMphathi welizwe eMzantsi Afrika, kunye Qatar Airways eDoha njengoSekela Mongameli oPhezulu, isiCwangciso soRhwebo.
YeeHambo zoMoya yaseMzantsi Afrika'I-CEO yexeshana, uThomas Kgokolo, uchaza uSimon njengegcisa elinamava kwezobuchwephesha kwezobuchwephesha kunye nengxelo yehlabathi yokuqhuba ingeniso enenzuzo kunye nokongeza ixabiso labathengi kwicandelo lokhuphiswano, elintsokothileyo nelikhulayo ngokukhawuleza. USimon ukwengeza ngokubonakalayo kumandla eqela lethu lesigqeba elinamava kunye nelinamava kakhulu - bonke ngoku baxakekile kwaye bakulungele ukuyisa iSAA phambili. Uzisa ubutyebi bamava obuya kuba yinzuzo enkulu kwi-SAA nakubathengi bethu kunye namaqabane ethu kwezorhwebo kwihlabathi liphela.
“Kuyandichulumancisa ukujoyina i-SAA njengokuba izakuqala isahluko esitsha kwimbali yokuhamba ngenqwelomoya eMzantsi Afrika. Lo ngumthuthi ophethe inzala etyebileyo enomona kwihlabathi liphela kwaye mna kunye neqela elilawulayo sizakusebenza ngokungakhathali kwimizamo yethu yokwamkela abakhweli ababuyayo, sikhulise ingeniso kwaye sihambise inzuzo ”, utshilo uMnu Newton-Smith.